Otú ịgbanwe Ndi an-kpọ XMBC ka VLC Player
Ọtụtụ n'ime anyị na-eji abụọ ma ọ bụ karịa mgbasa ozi ọkpụkpọ s maka ịkpọ videos. Ka ihe atụ, Windows Media Player apụghị egwu. Flv faịlụ. A nkịtị oke maka anyị bụ iji VLC ọkpụkpọ, nke nwere ike igwu ọ bụla usoro, site .mkv ka .flv. Ọtụtụ n'ime anyị nwere VLC dị ka anyị ndabere ọkpụkpọ.
VLC ga-enyere gị emeghe faịlụ ozugbo na mmadụ abụọ click na-enwe ya - e bụghị mgbe nile nsogbu nke video ma ọ bụ faịlụ adịghị akwado. Ebe a, anyị ga-atụle ihe iji mee ka VLC ka ndabere ọkpụkpọ.
Part 1: Windows: Olee ịgbanwe XMBC ọkpụkpọ ka VLC ka ndabere ọkpụkpọ?
Part 2: Mac: Olee ịgbanwe XMBC ndabere ọkpụkpọ ka VLC?
Ọ bụ mgbe ihe amamihe dị na abụọ media Player na gị usoro. Otú ọ dị, na-ọkpụkpọ VLC mgbasa ozi ọkpụkpọ n'ihu dị ka ndabere ọkpụkpọ. Lee ndị ihe iji mee ka VLC ọkpụkpọ ka ndabere ọkpụkpọ.
1. Open faịlụ Explorer na-aga ọ bụla media faịlụ na na meghere site XMBC. Ugbu a nri pịa video faịlụ, gaa na nhọrọ na-emeghe, na ịnyagharịa ka ndabere usoro.
2. Mgbe ịpị na set ndabere omume ị ga-enwe ndepụta nke omume na nwere ike imeghe faịlụ. Ọ bụrụ na ị VLC arụnyere na gị usoro ọ ga-abụ depụtara. Dị nnọọ pịa ya.
The faịlụ nke na usoro ga ugbu a mgbe niile na-emeghe na VLC ndabara. Nnọọ abụọ pịa ya na ego ọ bụrụ na ọ ga-emepe na VLC ọkpụkpọ.
Nkebi nke 2: Mac: Olee ịgbanwe XMBC ndabere ọkpụkpọ ka VLC?
Mac nwekwara ezi Player ndabara dị ka iTunes ma ọ bụ XMBC ma e nwere dị iche iche formats na ọ dịghị akwado. Ị nwere ike iwunye VLC n'ihi na Mac si ukara saịtị videolan.org. Download ọhụrụ version inwe nkwado maka kasị nso-nso formats.
1. Ịnyocha gị usoro maka faịlụ na-eji XMBC ọkpụkpọ. Gaa File taabụ na n'elu aka ekpe nke ihuenyo. Ugbu a, ịnyagharịa Get Ama.
2. gaa na-emeghe ngalaba na panel. A ga-enwe ndepụta nke usoro ihe omume dị na gị usoro. Ọ bụrụ na ị rụnyere VLC na gị usoro, ọ ga-abụ na ndepụta. Họrọ VLC na ndepụta.
Ma ọ bụ: Ị nwere ike mgbe niile na-agbaso otu nzọụkwụ eji maka windows ị nwere ike ịnweta na-emeghe site n'ịrụ nri pịa faịlụ na ịtọ VLC dị ka ndabere.
3. Ugbu a ịgbanwe nhọrọ ịgbanwe niile iji jide n'aka na faịlụ na otu usoro na-emeghe VLC ndabara. Dị nnọọ oghe ọ bụla faịlụ site abụọ na ịpị na ya iji ego ọ bụrụ na ọ ga-emepe na VLC ọkpụkpọ.
Ị nwere ike ịgbanwee azụ dị iche iche mgbasa ozi ọkpụkpọ mgbe ọ bụla ị na-achọ. Otú ọ dị, ọ bụrụ na ị na-amasị VLC, mgbe-na ọ na emelitere-nwere nkwado maka ọhụrụ formats. Cheta na-eji VLC dị ka ndabere gị ọkpụkpọ ga mfe anya ọtụtụ n'ime-echegbu gị. N'ihi na otu onye, ​​ị gaghị na-eche banyere converting videos site na otu faịlụ usoro ọzọ na ike na-agba ọsọ ha mfe, dị nnọọ mgbe download okokụre.
Download VLC 64 bit were were!
VLC vs Media Player Omuma: Kedu onye dị mma?
> Resource> VLC> otú ịgbanwe Ndi an-kpọ XMBC ka VLC Player?